सलमान खान र क्याटरिनाको बिहे ! « Khabarhub
सलमान खान र क्याटरिनाको बिहे !
मुम्बई – बलिउड सुपरस्टार सलमान खानको बिहेको हर कोहीलाई चासो छ । अक्सर सलमान खानको बिहेलाई लिएर दर्शकले पनि अनेक प्रश्न सोध्ने गर्छन् । खबर आएको छ कि, सलमान खानले बलिउड अभिनेत्री क्याटरिना कैफसँग बिहे गर्दैछन् । तर उक्त बिहे रियलमा नभएर रिलमा हुन लागेको हो ।
भारतीय मिडियाका अनुसार सलमान खान र क्याटरिना कैफ अपकपिङ फिल्म ‘भारत’ का लागि बिहेको शूट गर्दैछन् । यो खास बिहेको सिक्वेन्सका लागि एउटा गीत शूटिङ गरिनेछ । यो गीतको छायांकनका लागि विशेष सेट समेत बनाइएको छ । सेटलाई फूलले सजाइएको छ ।
एक अन्तर्वार्तामा सलमान खानले भनेका छन्, ‘फिल्म ‘भारत’ मा जुन मेरो भूमिका छ, उक्त भूमिकामा मेरो बिहे ७२ वर्षसम्म हुँदैन, मैले पनि यसैलाई फलो गरिरहेको छु ।’
हालै ‘भारत’ को सेटमा क्याटरिनाको एउटा तस्वीर भाइरल भएको थियो । यो फिल्मको लामो समयदेखि प्रतीक्षा छ । फिल्ममा सलमान खान र क्याटरिना कैफको अभिनय जोडी छ ।
प्रकाशित मिति : २२ माघ २०७५, मंगलबार ४ : २० बजे